Pedal remubatanidzwa otomatiki maturo mukomboni eyewash, mwenje uye yakapusa, inogona otomatiki kushayisa mukati yemvura yakasara yemaziso, mari uye inoshanda.
Gungano reziso rinotora zvikamu zvitatu zve304 simbi isina simbi + ABS yero epoxy resin, iyo isina musono simbi chubhu muforoma ichikanda kuumbwa kwakasanganiswa, kumeso kwepamusoro, yakasimba kumanikidza kuramba, hupenyu hwakareba hwebasa, ziso pamusika chikamu chakakosha pane gumi gungano rekuwisira gungano, weld, pamusoro coarse, kushanda pasi pekumanikidzwa hakusi kumanikidza, kuri nyore kutsemura pombi kuvuza, hupenyu hupfupi hwebasa
Chekutanga: BH30-5012 hombe pedal remubatanidzwa ziso washer
dhayamita 260mm, ukobvu 0.6mm, 360 degree kutenderera shawa, isina Angle yakafa, iyo nzvimbo yese yekufukidza nzvimbo yakakura, inosangana uye inopfuura iyo United States standard (zvinodikanwa mu1524mm kubva pakakwirira pasi, iyo inosasa dhayamita kusvika dhayamita ye508mm) , kuyerera kweshawa kusvika ku180L / min, inosangana zvizere nezvinodiwa zveAmerican standard yeziso rekuwacha maziso.
Ose ari maviri epamusoro uye ezasi anotora-maviri-bhora vharuvhu, yepamusoro kune imwechete-chidimbu bhora vharuvhu, kuzarura kukuru, inogona kusangana neAmerican muyero weziso washer yekugeza kuyerera. (Flushing kuyerera ≥ 75.7L / Maminitsi, ziso-kugeza kuyerera ≥ 11.4L / Maminitsi, inoshanda uye nekukurumidza kuyerera)
Chinogadzirika kuyerera chishandiso, inogona kugadzirisa kuyerera kwemvura chero nguva, kunyatso kudzivirira kumanikidza kwemvura kusagadzikana kunokonzerwa nekusaenderana kukwirira uye kuyerera hakugone kusangana nezvinodiwa zvekugezwa nemamwe matambudziko. Ndokumbirawo musimbise kuti kumanikidzwa kwemvura pane saiti kunosvika 0.25MPa.
Yekutanga modhi: BH30-5012
BH30-5012T: Mumwe muromo muromo zishambi
BH30-5012A: Chitiviri chidiki
BH32-5012: Yakakura pedal yakatarisana neziso washer (isina shawa musoro)
BH32-5012A: Chidiki chidiki chakamira cheziso washer (isina shawa musoro)
Pashure: Antifreeze eye washer (yakavigwa)
Zvadaro: Vertical ziso washer